Motorsport | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Ego ole bụ ụgbọ ala nke usoro 1
Ego ole ụgbọ ala nke usoro 1 bụ "ọnụ ahịa ụgbọ ala nke 1 Formula nwere ike iru ọnụ ahịa site na 600 puku ruo otu nde dollar" bụ ụgha jọgburu onwe ya, n'ihi na Maria Morgun gwara m ozugbo: ...
Ọkachamara kachasị ama nke usoro-1
Driverzọ ọkwọ ụgbọ mmiri kachasị ama-1 Nke a bụ Schumacher. Ndị mmadụ nke ọgbọ ọzọ nwere arụsị ọzọ - Alain Prost, Ayrton Senna. Senna Aerton Senna (rue n'etiti 90x) Mgbe e mesịrị - Schumacher N'ezie Schumacher N'ozuzu…
Kedu ihe bụ slalom?
Gịnị bụ slalom? Okwu - SLALOM: N’egwuregwu: okporo ụzọ ọsọ na-aga n'okporo ụzọ awara awara nyere. nnukwu na nnukwu s. na-awụli elu ụzọ. Mmiri skai obodo Keikuku s. na ...
kedu ka ọsọ ọsọ nke ụgbọ ala nke usoro 1 si dị
olee otú ọsọ ọsọ nke ụgbọ ala nke usoro 1 Dị ka akụkọ Sportbox.az si kọọ banyere GrandPrix247, na akara 2,2 kilomita dị na track na Baku, Bottas mere ka 378 km / h. Ihe ndekọ agbụrụ gara aga bụ ...
0113 - Igwe ihe dị elu nke ikuku dị elu, ọkwa dị elu.
Ihe na 22.08.2017
0113 - Ihe mmetụta ikuku nwere ikuku, mmepụta dị elu. N'ime "Boshevsky" DMRV, enwere mmetụta igwe ihe ọkụ nwere gburugburu. N’ọnọdụ gị, o doro anya na ọ bụ otu ihe ahụ. Ọ bụrụ na njehie abụọ rịgoro na DMRV ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,536.